Akwụkwọ nke Onwe: Definition, Examples, and Observations
Asụsụ Ekọwapụta nke Usoro Iwu
Akwụkwọ akụkọ (mejupụtara)
Akwụkwọ akụkọ bụ ihe ndekọ nke ihe mere, ahụmahụ na echiche. A makwaara dị ka akwụkwọ akụkọ , akwụkwọ edeturu, akwụkwọ edetu , na ndekọ .
Ndị edemede na-edebekarị akwụkwọ akụkọ iji dekọọ ndekọ na ịchọpụta echiche ndị nwere ike mechaa mepụta n'ime edemede , akụkọ , na akụkọ.
Akwụkwọ akụkọ bụ Brian Alleyne kwuru, sị: "Akwụkwọ akụkọ onwe onye bụ akwụkwọ nzuzo nke onwe ya," ebe onye edemede na-edekọ ma na-atụle ihe omume ndụ.
Ihe omuma banyere onwe gi n'akwukwo onwe gi bu ihe omuma nke oma ma ya mere nwere ike ighota ihe omuma nke onwe ( Networks Networks , 2015).
Ihe atụ na ihe
"Akwụkwọ edemede nke onye edemede ahụ bụ ihe ndekọ na akwụkwọ nchịkọta maka ndụ ederede gị. Ọ bụ ebe nchekwa gị maka akụkụ nke ahụmịhe, nchọpụta na echere na ị ga-eji ya mee ihe n'otu ihe ederede ma ọ bụ ihe ọzọ. ihe edere n'akụkọ akụkọ onye edemede kwesịrị ịbụ ihe dị mma. "
(Alice Orr, Ọ dịghị ihe ọzọ .) Akwụkwọ edemede Digest, 2004)
"Onye ọ bụla anyị na-ede akwụkwọ akụkọ na- eme nke a maka ihe dịgasị iche iche, echere m na, ma anyị aghaghị inwe mmasị na usoro ihe ijuanya na-apụta n'ime afọ ndị - otu ụdị arabesque nke ihe ụfọdụ na-apụta ma nwetaghachi, dịka atụmatụ na akwụkwọ akụkọ ọma. "
(Joyce Carol Oates, gbara ajụjụ ọnụ site na Robert Phillips. Paris Review , Fall-Winter 1978)
"Chee ihe ọ bụla dị oke egwu ịde ede, ya mere, ọ dị na njirimara dị nta. Ọ ga-eju gị anya ịhụ na ịmegharịrị akụkọ gị ihe dị mkpa na ikike dị egwu ndị a dị ntakịrị."
(Nathaniel Hawthorne, akwụkwọ ozi na Horatio Bridge, May 3, 1843)
Edee Stephen Spender: "Dee ihe ọ bụla"
"Ọ dị m ka ọ bụ na enweghị m ike ịde ọzọ. Okwu yiri ka ọ na-agbaji m n'uche dịka osisi mgbe m tinyere ha na akwụkwọ.
"M ga-esetị aka m ma ghọta ọtụtụ ihe ndị dị na ya. Lee ka ha si dị iche! Okpokoro balloons nke alumni yiri ka a na-atụgharị na mbara igwe dịka ihe mkpuchi ndị ahụ nke na-ejikọta esemokwu dị n'etiti nku nke biplane. , na West End juputara na ụlọ ahịa ịhapụ. A na-etinye sandbags n'elu ihe nkedo a na-ekpuchi n'elu ihe ndị dị n'akụkụ ala.
"Ihe kasị mma bụ ide ihe ọ bụla, ihe ọbụla na-abata n'uche m, ruo mgbe ụbọchị dị jụụ na nke okike dị oke mkpa. Ọ dị mkpa inwe ndidi na icheta na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eche bụ okwu ikpeazụ."
(Stephen Spender, Journal , London, September 1939)
"Mmetụta dị egwu, ebe a na ụlọ akwụkwọ, na Sọnde Ista, mgbe ndị mmadụ nọ na nke a (nke kachasị oké ọnụ) nke 'chalets' ka ọtụtụ n'ime ndị ọbịa, ịnụrụ ọnụ ọgụgụ buru ibu nke olu Igwe nke elu-igwe ... .... ụdị ntụrụndụ, inwe obi ike nke onwe ya, ịkwa ịchị ọchị mgbe nile bụ ihe ọ bụla, karịa ụdị nhụjuanya na ọgaranya jikọtara ya na ọrịa ọjọọ. "
(George Orwell, akwụkwọ ntinye akwụkwọ maka Eprel 17, 1949, Nchịkọta Ndị Mpịakọta 1945-1950 )
Ọrụ nke Journal
"Ọtụtụ ndị ọkachamara ọkachamara na-eji akwụkwọ akụkọ eme ihe , na àgwà ahụ dị mma maka onye ọ bụla nwere mmasị ide ihe, ọ bụrụgodị na ọ nweghị ihe ọ bụla edere ederede. Akwụkwọ akụkọ nke Henry Thoreau bụ ihe atụ a ma ama, dịka akwụkwọ edemede nke onye edemede si n'aka Virginia Woolf, ihe odide nke odeakwụkwọ bụ Albert Camus nke French, na 'A War-Time Diary' nke onye edemede England bụ George Orwell dere.
"Ọ bụrụ na akwụkwọ akụkọ ga - enyere gị aka ịzụlite dịka onye edemede, ị ghaghị ime ihe karịrị ịdepụta ihe ndị mara mma ma ọ bụ mepụta ihe na - eme kwa ụbọchị. Ị ghaghị ile anya n'eziokwu na nke ọhụrụ na ụwa na gburugburu gị na n'ime onwe gị . "
(Thomas S. Kane, Ntuziaka New Oxford na Ide Ihe . Oxford University Press, 1988)
Akwụkwọ akụkọ Thoreau
"Dịka nchekwa nke eziokwu, akwụkwọ akụkọ Thoreau na-eme ka ụlọ nkwakọba ihe nke onye na-ede akwụkwọ nke ọ na-egosi ihe ndị echekwara ya.
Ọ na-eme m na ihe ndị a na - eme n'otu oge, na - ekwu June 12, bụ:
Okpomọkụ banyere 85 na 2P.M. Ezi okpomọkụ.
Hylodes kwụsịrị ikpo.
Ekpere Purring ( Rana palustris ) kwụsịrị.
A na-ahụ ụzọ ọkụ ọkụ.
Ebube bullfrogs n'ozuzu .
Mgbochi na-amalite ịda mbà.
N'ehihie ụtụtụ-mmiri ozuzo fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile.
Na-ehi ụra na windo mepere emepe (10th), na-eyi uwe dị nkpa na eriri olu.
Osisi na-amalitekarị ịra. [15 June 1860]
Na mgbakwunye na ọrụ ha dị ka nchekwa, akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ihe mgbagwoju nke usoro nhazi ahụ, ebe ọkwa ndị ahụ na-aghọ nkọwa, ntụgharị uche, mmụgharị, ikpe, na ụdị ọmụmụ ndị ọzọ: 'Site na ihe niile dị na kọmpat, si n'ala dị n'okpuru na eluigwe nke di elu, abiawo ihe ndi a ma tinye ya n'eme iwu nke abia na akuko. Mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe oge ahụ ruru, a gụpụtara ha na nkuzi, na oge ọzọ, na oge ruru, site na nkuzi n'ime edemede '(1845-1847). Na nkenke, na magazin Thoreau na-ekwurịta mgbanwe nke eziokwu dị iche iche nke ederede ederede nke nwere iwu dị iche iche na-adabere. . .. "
(Robert E. Belknap, The List: The Uses and Pleasures of Cataloging Yale University Press, 2004)
Echiche nke Contrarian
"Ndị mmadụ na-ajụ ma m na-eji akwụkwọ edetu, ma azịza ya bụ ee. Echere m na akwụkwọ edemede onye edemede bụ ụzọ kasị mma a ga - esi mee ka echiche ọjọọ dị njọ, ebe usoro Darwin na - ewere ọnọdụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ide ihe ọ bụla. na-efe efe, ndị ọma na-anọkwa. "
(Stephen King, nke e hotara na "Gịnị bụ na Stephen King Gbara Ọchịchịrị?" Site n'aka Brian Truitt. USA Weekends , October 29-31, 2010)
Ndi na-ede akwụkwọ na-eche na oge ma ọ bụ na-ejide onwe ha?
"Ụfọdụ ndị na-achọ idebe akụkọ . Ụfọdụ ndị chere na ọ bụ ihe ọjọọ.
"Ndị mmadụ na-ede akwụkwọ na-ahụkarị ya dịka akụkụ nke usoro nke nghọta onwe onye na mmụba onwe onye, ​​ha achọghị ka nghọta na ihe omume mee ka ha nwee uche. maara mmetụta ha.
"Ndị mmadụ na-emegide onye na-ede akwụkwọ akụkọ na-atụ egwu ya na-eme ka mmadụ nwee onwe ya na ịkọ akụkọ. CS Lewis, bụ onye na-ede akwụkwọ mgbe ụfọdụ, na-atụ egwu na ọ dị njọ na mwute ma na-eme ka neurosis dịkwuo ike. Gen. George Marshall anaghị ede akwụkwọ n'oge Agha Ụwa nke Abụọ n'ihi na o chere na ọ ga - eduga 'nghọgbu onwe onye ma ọ bụ ịla azụ n'ịga mkpebi.'
"Ajụjụ a bụ: Olee otu ị ga - esi nwee ihe ịga nke ọma n'ịbụ onye a na - akpọghị n'emeghị onwe gị?"
(David Brooks, "Ogologo oge ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya?" New York Times , August 7, 2014)
Iwu iri na abụọ iji debe akwụkwọ edemede nke onye edemede
Ndị edemede na-ede akwụkwọ: Uru nke idebe akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ akwụkwọ edemede ederede
Nkwupụta okwu: JUR-nel
Nkwupụta okwu ọjọọ
Nchịkọta mgbanwe (grammar)
Gịnị Ka Nkọwa pụtara?
Morph (Okwu na Okwu Okwu)
Kedu ajụjụ a na-atụ egwu
Kedu ihe bụ nyocha (n'ime ihe na nkwurịta okwu)
Ọtụtụ Nkọwa Ụwa Na-akọwa Nkọwa Nkịtị
Uzo esi eme ka ogwe osisi di elu
Palettes na-acha odo odo nke Ihe Edemede Akara
Kedu ihe bụ Metabolism in Architecture?
VASQUEZ Aha nna na Amalite
Egwú ndị dị egwu dị ka Elvis
Kedu Nkume Nkume Na-agba Akpụkpọ ụkwụ M Kwesịrị Iwe?
1951 - Winston Churchill ọzọ Prime Minista nke Great Britain
Ihe Ndị Nne Na-eme Maka Ụmụaka nwere Nkwarụ
Ihe ndekọ nke uru ịgwọ ọrịa nke ịṅụ oriri na ọṅụṅụ
Isi nke ise nke oke ịda mbà n'obi
Helen nke Troy na Iliad nke Homer
Uru nke Postgraduate Year
Cómo achọtara copia del certificado de nacimiento
Ụdị Echiche Mkpa nke Ukwuu - Ndị Gbara Aka?
Chemistry Scavenger Hunt - Clues and Answers
Free Morphemes na English Definition na Ihe Nlereanya
Ịgba Grik: Ascoltare Conjugations
Otu esi ejikọta ngwa ngwa ahụ bụ "ịkwa ákwá" (ka ọchị)
Mmeri Na-amalite n'Ụlọ - Agha Ụwa nke Abụọ
Otu esi ejiko njikọ na ịnweta database
Kedu nke Na-abata Mbụ, Melody ma ọ bụ Lyrics?
Ihe omuma ihe omuma banyere Helen na Ezinụlọ ya